Loners invisible - စာမျက်နှာ 31 - ဘလော့စပိန်ယဉ်ကျေးမှု, လူ့အဖွဲ့အစည်း, နိုင်ငံရေးနှင့်အပန်းဖြေ
23 မတ်လ 2019
[ 23 marzo, 2019 ] La gran esperanza blanca y otra mayoría inmensa y necesitada que aprovechará la busqueda de su destino Sociedad
[ 22 marzo, 2019 ] ¿Que los años pasan muy rápidamente? Sí, para el que envejece. (Knut Hamsun) Sociedad
[ 10 marzo, 2019 ] “La violenciaaun menor convierte al pervertido en un animal incontrolable“. Sociedad
[7marzo, 2019 ] ¿ Por qué las personas altas tienen más riesgos de padecer cáncer ? Sociedad
[7marzo, 2019 ] En Haití unos pocos encuentran el camino que aunque abrupto están decididosarecorrerlo, otros no lo reconocen cuando lo encuentran, otros ni si quiera quieren encontrarlo pues creen que no merece la pena intentar dar un primer paso. Sociedad
Rosalia Iglesias ဒါမှမဟုတ်ဘက်မလိုက်တရားမျှတမှုနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်တစ်ခုသို့မဟုတ် desmemoriada သောတရားရုံးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်တစ်ဦးလတ်ဆတ်တဲ့နည်းမနော
29 Mayo, 2018 Belz 21
ဒါဟာနိုင်ငံသားများ fraudsters ဖို့တောင်းပန်ပါတယ်နှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသင့်ကြောင်းပုံရသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသူကငါတို့ရှိသမျှသည်တစ်ဦး "ရှင်ဘုရင်" နှင့်အင်္ကျီအောက်မှာသူခိုးရှိသည်ပါပဲ။ ငါမကျင့် [ ... ]
စပိန်: အစိုးရကဝန်ဆောင်မှုထိန်းချုပ်မှုလက်ပတ် Battery ကို၏စျေးနှုန်းပေါ်ပေါက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်တားဆီးဖို့အခြေအနေနောက်တဖန်ပျက်ပြယ်ကြေညာခြင်းကိုပြေစေပြီး
27 Mayo, 2018 Belz 3
EVA Belmont - CIVIO ၏သတင်းထောက်နှင့်စီမံကိန်း Manager ကိုသင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမဆိုပါကမသိရ - ကလိုတိုင်းပြည်တစ်ပြည်၏လုပ်ရပ်များ၏ CIVIO င့်လင်းမြင်သာအတူပါဝင် [ ... ]
Rothschild, သောသူတို့ပိုင်ရန် "ကမ္ဘာ၏သခင်" အုပ်စုတစ်စု၏ရည်ရွယ်ချက်ပိုင်းခြားသိမြင်ဖို့အသိအမှတ်ပြုအတိုင်ပင်ခံအကြောင်းပိုမို။
25 Mayo, 2018 Belz 5
ကြီးစွာသောအဖြူမျှော်လင့်ချက်သည်ယခုအခါတွင်လည်း Rothschild ရဲ့လောက၏အကွယ်အကာအတွက်ကမ္ဘာသစ်နိုင်ရန်အတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်း၏ "အဝါရောင်" ရေးစပ်, ဤလောကသို့ဘာသာပြန်ထားသောအရာ "Concordia, Integritas, စက်မှု" ဟုဆို [ ... ]
24 Mayo, 2018 Belz 92
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိစ္ဆာဒိဌိအားအတွက်တရားမျှတမှာ .. နေဆဲ "sopetón" မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုရပ်တန့်နိုင်သူမသိရပါဘူးတဲ့ "ဝိုင်းလေး" ၏ "မြင်း" စီးနင်းသွားကြဖို့အများကြီးရှိနေဆဲရှိပါတယ်။ ယခင်နေ့၏ပဲ့တင်သံနှင့်အတူ [ ... ]
Cipitrol 4: ကာရစ်ဘီယံဆင်းရဲမွဲတေမှုသွေးဆောင်အိပ်ပျော်ခြင်းကျွန်စနစ်
23 Mayo, 2018 Belz 24
Cipitrol 4: ဆေးသောက်ရန်ဖွဲ့စည်းမှုပြောင်းလဲနေတဲ့အစွမ်းထက်သက်သာစေသောဆေးနဲ့လူ့စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်မှဖြစ်နိုင်ဖျက်ဆီးထုတ်လုပ်သောအေဂျင်စီများက "ကျွန်စနစ်" ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ သည်ထင်ရှားရက်သတ္တပတ်တစ်စုံတွဲ [ ... ]
ဒို Zaplana သာနေရာအများစုရိုးရှင်းတဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ဖောက်ဖျက်၏ရာဇဝတ်မှုများကိုထွက်ခွာ, ငွေကြေးခဝါချမှုတုံ့ပြန်
23 Mayo, 2018 Belz 64
တစ်ဦး aznarista အစိုးရဝန်ကြီးများ 15, 13 ကွဲပြားခြားနားသောအကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိစ္စများတွင်တရားစွဲဆိုခံရတက်အဆုံးသတ်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်လနျ့စရာအလှနျဖြစ်ဆက်လက်နောက်ဆုံးပေါ်ဖမ်းဆီးသောကွောငျ့ဖွစျသညျသောအခါအများကြီးပုပ်အနံ့ [ ... ]
17 Mayo, 2018 Belz 0
သှားပွီး။ ပွုံးကအားလုံးကိုပြောပါ, ငါတို့ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ် destabilized သောသူတို့၏အမျိုးအတှေး, စကားလုံးနှင့်လုပ်ရပ်လူတိုင်းထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်။ Quim Torra ရေးသားခြင်း / Author: ဗစ်တာ Ma Lo ။ သငျသညျအရသိရသည်မစ္စတာ Chis TORRA, [ ... ]
« 1 ... 30 31 32 ... 50 »
သတင်းအချက်အလက်များ - နိုင်ငံရေး - အက္ခရာ - ယဉ်ကျေးမှု - စီးပွားရေး - လူ့အဖှဲ့အစညျးသ
5 ဇူလိုင်လ 2018 0
အဆိုပါစပိန်တရားမျှတရေးခဲ့ကြပြီတိုင်ကြားမှုများနှင့်မီဒီယာအစီရင်ခံစာများရာပေါင်းများစွာပြီးနောက်, သရုပ်ပြမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအကျင့်ပျက်ခြစားမှုပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ပတ်သက်. ရှိသည်ဟုမှတ်စရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ် [ ... ]
မူရင်းစပိန်ဘလော့ခ်၌တည်ရှိ၏ - အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်